မြ သည် detective | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မြ သည် detective
မြ သည် detective
Posted by မြစပဲရိုး on Dec 22, 2015 in News, Think Different | 15 comments
ဒီနေ့ သတင်း နှစ်ပုဒ် ဖတ်အပြီး ခေါင်းထဲ အတွက်အချက် တွေနဲ့ ရှုပ်သွားမိတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
ပထမ သတင်းက Miss Philippines ဟု ပြောရမဲ့အစား Miss Colombia လို့ မယ်စကြာင်္ဝဠာ အမည်ကို မှား ကြေညာ မိသော သတင်း။
ဒီလောက် ရှင်းရှင်း ရေးထားတာ ကို မှားရ သလားဟု ထူးဆန်းသည်ဟု ထင်ပါက လဲ ထူးဆန်းသပေါ့။
လူဘဲဟယ်၊ အမှားကင်းပါ့မလား ဟု မထူးဆန်းပါ ဟု ထင်ပါကလဲ မထူးဆန်းပေါ့။
Miss Universe: Miss Colombia mistakenly crowned as winner – 21 December 2015 From the section US & Canada
ဒုတိယ သတင်း က ပထမ သတင်း အောက်မှာ More on this story ဆိုပြီး တွေ့လိုက်လို့ ဆက်ပြီးဖတ်မိ တဲ့ သတင်း။ အဲဒါက Miss Universe 2014 မှာ Colombia ကဘဲ Miss Universe ရခဲ့တဲ့ မိန်ကလေး (အခု 2015 ပွဲ မှာ သရဖူ ဆောင်းပေးသူ) က Donald Trump ကို ဝေဖန်ခဲ့လို့ Donald Trump တစ်ယောက် ဒေါဖောင်း တဲ့ သတင်း။
အဲဒီလို ဝေဖန်ချိန် ဇူလိုင်လ ထိ Donald Trump က Miss Universe ပွဲ ရဲ့ ပိုင်ရှင်ပါ။
စက်တင်ဘာ လ ကမှ သူ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ကို ရောင်းထုတ်လိုက်တာ။
Mexico also announced that it would not sendacontestant to the pageant. (ဒါပေမဲ့ ဝင်ပြိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းက အဲဒီပွဲ က ဒီနှစ် Donald Trump လက်အောက် မှာ မရှိတော့ ဘဲ ဖြစ်သွားလို့ ထင်ရဲ့)
ဒါက Donald Trump Tweet လုပ်ထားတာပါ။
11:41 AM – 21 Dec 2015
ကိုယ့် အလုပ် ကိုယ်မလုပ်နိုင်ဘဲ သူများ တွေ အကြောင်း စပ်စုပြီး ဘယ်သူမှ မဝေဖန် သေးတာ ကို အစထုတ် ဆြာဂျီး စတိုင် နဲ့ အိုင်ဆေး ကိုသိန်းမောင် လုပ်ကြည့်တာပါ။
ကြေညာသူ Steve Harvey မှားခဲ့တာ တကယ်ဘဲ ရိုးရိုးသားသားလား။
ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ် မှာ ဝှက်ဖဲ ရှိနေလား။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် Mr Trump မရှိတော့မှ ဒီ လို ပြသနာ ဖြစ်လိုက်တာလား။
ဘူ သိနိုင်မလဲ။ နော။
ဒီလို လောကကြီး က အဖြစ်အပျက် တွေကို သံသယ နဲ့ ကြည့်နေမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်တောင် ပြန်သနားလာမိပါပေါ့။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အခုလက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ US presidential election မှာ Mr Trump တစ်ယောက် တစ်ခုခု ကို မွှေမလားဘဲ လို့ တောင် ကြားက နေ မဆီမဆိုင် စိုးရိမ်မိသား။
ဒါဟာ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ် တဲ့ Random အကြောင်းလား၊ အကြောင်းတစ်ခုကနေ ဖြစ်တဲ့ အကျိုးဆက်လား။ Who knows! !!!!
မယ်ရွေးပွဲ မှာ တိုက်ဆိုင်တယ် ဆိုတာ မရှိ..!!
အောင်မြင်တဲ့ မယ် ရွေးပွဲများရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ချမ်းသာသော သထိန်းကြီးးများရှိ၏.. ဟိ…!!
ပိုက်ဆံတွေ သုံးဖို့ထက် အများကြီး ပိုလျှံ.. ဖြုန်းဖို့ လိုနေတဲ့ သထိန်းတွေ အာဏာရှင်တွေ
သူတို့ ဘဝမှာ သူများ ဘဝတွေ ကို မွှေနှောက် ကစားပြီးး ပျော်စရာ ရှာ ဖို့ ပဲ ကျန်တော့တယ်…
အရီးကတော့ အဲဒီ လူကြီး ကို မျက်စိ စပါးမွှေးစူးနေတာမို့ သူ့ ပယောဂ မကင်းကို ထင်တာဘဲ။
အဲဒါနဲ့ဘဲ ပို့စ်တစ်ပုဒ် တောင်ဖြစ်လို့။
သို့ပေမဲ့ အဲဒါဟာ တကယ်ဘဲ publicity stunt အတွက် ဆိုရင်တော့ စင်ပေါ်က မိန်းမ တွေ ကို စော်ကားတာဘဲ။
အွန်းလေ.. ဒီလိုနိုင်ငံက.. ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ.. ဒီလိုမှားတယ်ဆိုတာ..
ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ။ အဲဒီလို Result ကို ပြောရတာ စာရွက် က For show တဲ့။
တကဲ့ Result က နားကြပ်က တစ်ဆင့်ကြား ရတာ ကို ပြောရတာလို့ ပြောတာဘဲ။
အင်တာနက် သတင်းတွေကတော့ သိတဲ့အတိုင်းဘဲ သမီးရေ။ ချင့်ယုံ ဘဲ။
ဘီအီဂလုတာ တစ်စိတ်လိုသွားလို့ လစ်မစ်မပြည့်ပဲ လပ်ကျွတ်သွားတာ
မေဘရဏီသော်ပြောတာကတော့.. သူတို့တွေမြင်နေရတဲ့… ဘုတ်မှာထိုးတာက.. အစကတည်းက.. မစ်စ်ဖိလစ်ပင်းတဲ့..။
ကိုလှန်ဘီယာကို တက်တက် စော်ဒကားဒါဘဲနေမှာ
မြန်ပြည်မှာဆို ရေတန့်ဘူးကြိုက်လား ရှူ ရှူးဘူး ကြိုက်လားပဲ
ကိုလှန်ဘီယာမို့ ငြိမ်ခံဒါ ဟွန်း
.ဖတ်ပြီးဘာမှမဝေဖန်တတ်လို့ အသာဇက်ပုပြီးပြန်ထွက်သွားပါဂျောင်း :))
တကယ်တော့ ပရန်ဆန်တာက မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ အခု နောက်ထပ် သတင်းတစ်ပုဒ်ထွက်နေတယ်။ ပရန်ဆန်တာက ကဒ်ကဟာကိုမကြည့်ဘဲ Photometer ကိုကြည့်မိတယ်ဆိုလား။ အဲ့မျာ ကိုလံဘီယာလို့ ပြထားပါသတဲ့။ တကယ်တော့ ပရန်ဆန်တာ မွှေတာပါ။ ဒိုနယ်ဒရန့်ကတော့ သူသာဆို
အနော့် ဖွေးဖွေး မပါတဲ့ပွဲကို…ပါတဲ့ပွဲလောက် စိတ်မွင်ဇားဝူးးးး
အမ်တီမြက ကျောင်းသားသပ်မဂ မုန်းတီးရေးဝါဒီစိုဒေါ့ စုံထောက်မလှုပ်နဲ့ လုံထိန်းလှုပ်။